नेपाल पाँच वर्षपछि विकासशील राष्ट्रमा उक्लिने
प्रतिनिधि सभा बैठक २३ फागुनमा बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश
हिप्पी जो फ्रिक स्ट्रिट र पाई एल्लीमा भेटिए
चीनले गरीबीविरुद्धको लडाइँ कसरी जित्यो ?
सानिमा ब्यांकबाट निम्न आयस्तरका महिलालाई २० हजारसम्मको उपचार खर्च
उद्योग खोल्न अनेक झन्झट, झुलाउने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता हैरान
नेकपाको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङ बर्खास्त, विशाल भट्टराई नियुक्त
१८४ लोककथाको सँगालो
अम्बर गुरुङ : एक स्वादिलो बहाव
छिनको छिनमै चित्र !
व्यक्तिवृत्त मिलन बगाले
हलमा जम्मा भएका दर्शकसामु ठूलो क्यानभास लिएर संगीतको मधुरो धूनसँगै उनका हात जादू गरेझैं नाच्छन्। पाँच सात मिनेट उनका हात बिजुली गतिजस्तै गरी चलेपछि असाध्यै सुन्दर चित्र तयार भइसक्छ।
सम्झनामा गाउँको तिहारः बिजुली होइन, मैनबत्तीको झिलिमिली
वर्षभरीमा लक्ष्मीपूजाको साँझ मात्र गाउँ उज्यालो हुन्थ्यो। कुनैदिन बिजुली आउला भन्ने कल्पना गर्दै लाल्टिनको बेला (सिसा) सफा गर्दा तथा धिप्री र पानसको ध्वाँसो फालेर नयाँ झुम्रो राख्दाका ती दिन शहरमा बलेका झिलिमिली बत्तीले झल्झली सम्झाउँछन्।
हाम्रो बसाइ शैलीमा ‘होम आइसोलेसन’ कति सहज ?
कोरोनाको कहर बढ्दै जाँदा अस्पतालमा बेड नपाइने अवस्था छ। त्यसैले ‘हर घर क्वारेन्टिन’ बाट अब ‘हर घर आइसोलेसन’ हुने जोखिम छ। त्यसका लागि मानसिक र भौतिक रुपमा तयार हुनैपर्नेछ।
कोरोना कहरको डायरीः पृथ्वीको डिलमा उभिएर... डायरी पल्टाउँदै जाँदा देखें, शहर त परिकारमय भएछ। घरघरमा अनेक परिकार पाके। त्यसको बास्ना सामाजिक सञ्जालमा फिजियो। अनि खानपिनको रमाइलो चरण सकिएसँगै बन्दाबन्दीको पीडा देखिन थाल्यो।
सर्प पाल्ने कि चुल्हो बाल्ने ? काम खोसिएर अलपत्र नागरिकको चुल्हो बाल्न उदासीन सरकार नेताका प्रतिष्ठानलाई सर्प पाल्न बजेट छुट्याइरहेछ। राज्यको ढुकुटीलाई निजी ढुकुटीसरह सोचेर यस्ता परियोजना बनाइन्छ। लोकतन्त्रको योभन्दा विद्रुप नमूना अन्त कतै भेटिएला र?
डा. गोविन्द केसी र मैलो मनको उपचार केही वर्ष पहिला जाजरकोटमा ‘हेलिकोप्टर हैजा पर्यटन’ चलिरहँदा डा. गोविन्द केसी खच्चडलाई औषधिको भारी बोकाएर उकालो उक्लिरहेका थिए। अहिले पनि औषधि बोकेर दुर्गम पुगेका उनी प्रहरी घेराबन्दीमा छन्।
मनमनमा बसेका कविवरलाई सदा सम्झन्छ नेपाली... धेरैको कवि जीवन अल्पायुको हुन्छ । तर, यसमै दीर्घ जीवन बाँच्नुभएका कविवर यो देशको अस्तित्व रहेसम्मै कवि भनेर चिनिनुहुनेछ । ज्योतिको पङ्ख उचाल्न सिकेका नेपालीले उहाँलाई सदा सम्झिरहनेछन् ।
घाटमा हराएको मानवता कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका स्याङ्जाका एक वृद्धको शव व्यवस्थापनमा स्थानीय वडाध्यक्षदेखि प्रदेश सांसदसम्म सम्मिलित समूहले अवरोध गर्‍यो। त्यहीकारण १९ घण्टासम्म शव अलपत्र परेको थियो।
भेरीमा बगेको हाम्रो मानवता नवराज विकसँगै यतिवेला थुप्रै युवा र तिनको परिवारका सपना भेरीमा बगेका छन् । हामीले भन्ने गरेको मानवता, कथित ‘सुखी र समृद्ध’ को नारा अनि आडम्बरयुक्त आधुनिकताको परिभाषा पनि यससँगै बगेको छ ।
अराजक प्रधानमन्त्री, उत्ताउलो सचिवालय बालुवाटार, खुमलटार र कोटेश्वरतिर हुने कोठे बैठकमा यति बेला देश कान थापिरहेको छ । सिंहदरबार सुनसान छ । बालुवाटार तातेको छ । देशका लागि नभई हल्लिएको कुर्सीको पीरले बालुवाटार तातेको हो । आफैंले बेस्सरी खोतलेको जगमा प्रधानमन्त्री अलिकति सिमेन्ट खन्याउन खोजिरहनु भएको छ ।
अस्पतालको शय्यामा पनि कृषिकै कुरा प्रयागदत तेवारी कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (इफाद) बाट रिटायर्ड भएर फर्केपछि खाद्य संकट, स्थानीय उत्पादन र बजारीकरणबारे चिन्तनमा लाग्नुभयो। देश चलाउनेलाई कृषिमा लगानी गर्न घच्घच्याउनु मात्र भएन, बजेटमा एक घर एक रोजगार कार्यक्रम हाल्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाउनुभयो।
राहतको राजनीति र राज्यको उपस्थिति चुल्हो बल्ने आधार भत्किएको दिन भोक कोरोनाभाइरसभन्दा ठूलो समस्या बन्छ । प्रचारबाजी र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर जनतालाई राज्यको अनुभूति गराउन तीनै तहका सरकारले एकआपसमा समन्वय गर्नुपर्छ।
काेभिड-१९ महामारी: मान्छेलाई बिसन्चो, प्रकृतिलाई सन्चो समग्र सृष्टि आफ्ना लागि बनेको, आफूले लाउने, खाने, रमाउने साधन मात्र हो भन्ने अहङ्कार त्यागेको दिन प्रकृतिसँगै मान्छेलाई पनि सन्चो हुन्छ।
महामारीमा स्थानीय सरकारको भर संकटसँग जुध्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार र स्रोतसाधनसहितकाे बलियो बनाउनु पर्छ । स्थानीय सरकारले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेकाे डोजर जोत्ने, भ्यूटावर र गेट बनाउने बजेटलाई ‘कोरोना कोष’ मा हालौँ।
राहत कोषले बल्ला सर्वसाधारणको चूल्हो?
टिप्पणी मिलन बगाले
सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी गर्नैपर्ने कामबाहेक बन्दाबन्दीको मारमा परेर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न नपाएका नागरिकको भान्सामा चियाउनु जरुरी छ। संघीय सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम काेषमा रकम जम्मा गरेर मात्र ती मजदुकाे भान्सामा चूल्हो बल्न सक्दैन ।
भुइँचालोले घरबाहिर पुर्‍यायाे, कोरोनाले घरभित्र
भूकम्पले हामीलाई घरबाहिर धकेलेकोे थियो । कोरोनाले घरभित्र घचेटेको छ । यतिबेला हाम्रो भर भन्नु नै घरभित्रको जीवन भएको छ । संसारभर फैलिएको यो कहरका बेला नेपाल सिंगो पृथ्वीको डिलजस्तो भएको छ।
पर्यटकलाई रात्रिकालीन प्याकेज, अल्लारे लहडबाजी
सम्पदा संरक्षण गर्दा आम्दानी बढ्छ, त्यसमा दुईमत छैन तर आम्दानी बढाउने नाममा ऐतिहासिक सम्पत्तिको महिमा र गरिमालाई बचाउन सक्नुपर्छ।
गाउँगाउँमा डोजर आतङ्क
जताजता डोजर गयो उताउता डाँडापाखा भत्कने मात्र हैन, सामाजिक सद्भाव पनि भत्कँदै गएको छ।
कठै ! सिंहदरबारको पर्खाल
झरीले भत्काएको सिंहदरबारको पर्खालले जतिसुकै शक्तिशाली र सुरक्षित ठानिएकाहरू पनि जोखिममा रहेको प्रमाण दिएको छ।
भक्तपुरलाई सिकाएको सिम्रौनगढ
राजधानीको संस्कृति र कलाको चेतमा सिम्रौनगढको योगदान मिसिएको छ। तर, सिम्रौनगढ ?
पुनर्निर्माणको मनकामना पाठ
समुदाय र सरकारको हातेमालोबाटै गर्न सकिने सम्पदा पुनर्निर्माणमा विदेशी सहयोग खोज्नु सुहाउँदो कुरा होइन।
पुनर्निर्माणमा ‘जंगी मोडल’
विपतपछिको आवास निर्माणको काम राज्य प्रशासनलाई पन्छाएर सेनालाई दिने सरकारको रहर कुनै पनि हिसाबले उचित छैन।
भय भुल्दै, लय भुल्दै
प्रकृति र संस्कृतिलाई भुलेर मौलिक शैली र सामग्रीलाई एकातिर पन्छाएर कुचुक्कको संरचना बनाउँदैमा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया पूरा हुँदैन।
बारा विपत्‌काे सन्देश
हावाहुरीको प्रकोप हाम्रा घरबस्तीको कमसल निर्माण सुधार गर्ने जनाउ घण्टी हो, यसतर्फ स्थानीय र प्रादेशिकसँगै संघीय सरकार समेत संवेदनशील बन्नुपर्छ।
गोलबजारको मन दुख्ने खबर
स्रोतसाधनले सम्पन्न भए पनि हरेक चिज असरल्ल र अलपत्र जस्तो देखिएको गोलबजारलाई सुव्यवस्थित बजार बनाउन सकिन्छ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सन्तोषको सास फेरे पनि गाउँबस्तीमा धमाधम बनिरहेका दुईकोठे घरमा ग्रामीण सभ्यता र आवश्यकता अटाउन सकेको छैन ।
सेवा सिध्याउने लहड
सरकारले शहरवासीलाई नयाँ सुविधा दिनु त परको कुरा, भइरहेको सेवा समेत निमोठिरहेको छ ।
सरकारको कस्मेटिक रहर
पछिल्लो समय ‘बुटिक’ को मोहमा परेको सरकारले तामझाममा लागेर प्राथमिकताका अरू विषय बिर्सनु पटक्कै सुहाएको छैन।
सरकारको घातक रहर
भाडाको घरमा संसद् चलाइरहेको सरकार सबै पूर्वाधार प्रशस्त भएर अब के रचना गरौं भन्ने छटपटी भएजस्तै पुस्तकालयको जग्गा अतिक्रमण गरेर राजकीय अतिथि गृह निर्माणको रहर पालिरहेछ।